Abaxhasi bempahla yangaphantsi kunye neFektri- Abavelisi beengubo zangaphantsi zase China
Amanenekazi angama-2020 amaLokhi aSebenzisa iiwotshi eziVulekileyo eziVulekileyo esiSinqeni
umzimba wethu shaper isinqe esiphezulu esilelweyo ukuthoba isicubu ngokulawula okuthe tye, yenza ukuba isisu sakho sibe kancinci, siqine kwaye sibe nobubele, sikunike umzobo weyure.
Amanenekazi aselubala angama-underwear amabhanti ebhinqileyo 27s + panties yabafazi
Isinqe esisezantsi esine-seamless thong. Usebenzisa i-86% i-nylon + 14% ye-spandex, ilaphu linobusilika, liphefumla kwaye liyadumba. Izitayile ezithe tyaba kwaye zithe tye zilungile, umsebenzi ogqwesileyo ubalasele, uthambile kwaye ulambile, kwaye umgangatho uyabonakala. Iitongs zikhululekile kwaye zibonisa iibhuthi, zikhulula i-corset.
Abafazi bathwala iibhlothi
I-Bingsi yangaphantsi engenamthungo, ilaphu elithambileyo, elikhanyayo kunye nokuphefumla, ilungile engenamthungo. Ukusikwa ngento engenamthungo, ikotoni ezantsi, antibacterial, sweatshi-monitor. Khusela impilo yabasetyhini. Imibala yesiphelo esiphantsi iyathandeka.
I-YIYUN I-Snist ephezulu ye-Snug Tummy yokulawula i-Butt Shapewear yeLifter Shapewear yabasetyhini engenasiphazamiso esinqeni se-Shist.
Isinqe esiphakamileyo, Esingatyibilikiyo, isigubungelo esigcweleyo, ukuphakamisa i-butt, ukungabi namthungo, i-panties enobuchule obumnandi obuphakathi ukunxiba ngaphantsi kwalo naluphi na uhlobo lwepent.Comfy njengolusu lwesibini, olu luyilo lwentengiso luhamba nawe, hayi ngokuchasene nawe. Hlala, wolule okanye udanise..Ikhangela intle, izihlwitha imini yonke.
Abafazi abathengisa i-sexy baphethe iibhutsi zeebhotile batyhalela phezulu benkqantosi baphefumlela ngaphandle
Isinqe se-elastic, sokuphefumla kwaye sisondeleleneyo, singakubolekisi isikhumba, yonwabele ukunxiba okusempilweni nokonwaba. Ukufuma kunye nokuphefumla okulingeneyo kusonga okhalweni. Iinyawo zithambile kwaye azisixinisi ngokulula. I-crotch enempilo, ungqengqelo oluphindwe kabini
I-2020 yentengiso eshushu entsha ithwala i-buttocks panties control tummy butt yonyusa ibhulukhwe ye-booty shaper
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kwefektri, isisu esitsha emva kokubeleka, isinqe esivelileyo, ibhulukhwe ye-hip, ibhulukhwe ephezulu yomzimba wesisu, ibalaselisa ijika labasetyhini, elithandekayo kunye nelinomtsalane. Uyilo lwe-hem lenza ukuba le nto yomelele kwaye ihlale ixesha elide.
I-YI YUN Yentengiso eshushu esinqeni kodwa ephakamisa i-panties ephethe i-buttocks pad phairs panties
Iipuzzle zesiponji kunye neebhlukhwe ezifanelekileyo kwi-hip, iipakethi ezakhelwe ngaphakathi, iipads zesiponji ezikhuphekayo, kulula ukucoca. Ipali ephezulu yentlahla ineswekile kwaye inokuphefumla, kwaye ayizukukhubazeka xa ihlala. Uyilo olungamaki uphawu esinqeni, anti-ekuqaleni, anti-rolling.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kwimveliso entsha imfashini ephezulu abafazi abancinci be-tummy control bephethe i-buttocks underwear
Le mveliso yi-95% yekotoni + ye-5% spandex. Ilaphu lithambile kwaye liyaphefumla, kwaye likufuphi nolusu. Isinqe esiphezulu siyolula isisu, sinciphisa amanqatha, sinyuse amaqhosha. Ukungcungcuthekisa kunye nokukhupha ubungqina be-sweat kwenza ukuba kube nzima ukuba iipilisi.
Abafazi Amaphepha axhonywe kwi-Butt Lifter Panty I-Butt ye-Hip Shoti yokuhanjiswa kweengubo zangaphantsi zebrashi I-Push Up Panties Plus size
Le mveliso isebenzisa ilaphu elincinci elincinanana, elinobushushu kunye nokuphefumla, elungele ukunxiba ihlobo. Amanqatha abhencileyo enzelwe ukuphakamisa izinqanawa ukuze ziveze ijika lobufazi.Shapermint yababhinqileyo kulawulo lwesisu kunye neButter Lifter.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo i-butt butt ukuphakamisa i-buttocks panties tummy control sexy abafazi panties
Iibhulukhwe eziphezulu esinqeni esinqeni kunye nesinqe somntu ogqibeleleyo. Isinqe siyasongeleka, asinanxibi, sikhaphukhaphu kwaye siyadibani kwaye siyaphefumla. Yenziwe nge-95% yekotoni + 5% ye-spandex, ethambileyo kunye ne-elastic, i-sexy ngaphandle kokushiya nayiphi na iminatha.
Ulawulo lweTummy luphethe i-buttocks panties shaper lifter tyhala phezulu kwi-pad pad yokuphakamisa isambatho
Iibhulukhwe ze-hip-hip ezingabekwanga uphawu, ezizele isiponji se-hip, ezinemikhono yendalo ngokwemvelo. Umtya wentambo, ugcwele ubuhle bobufazi, u-sexy kwaye awunamthungo. Iigiya zangaphakathi ezibini zikhuselekile ngakumbi. I-elastic ephezulu ifanelekile, iqinile kwaye iqinile. Itekhnoloji yokubumba into enye, le nto ilula kwaye ayingophawuli kwaye ayinakuphefumla.